Click to copyhttps://apnews.com/23a4a3898a16df63f438570e65c84aab
LAWRENCE BARTLETTDecember 5, 1986
Home Affairs Minister Enos Nkala said he freed Dabengwa and two other aides of opposition leader Joshua Nkomo in hopes ″they will help to bring about peaceful conditions ... before the total integration of the two political parties.″
The announcement came as Prime Minister Robert Mugabe prepared to merge his ruling Zimbabwe African National Union with Nkomo’s Zimbabwe African People’s Union after a year of talks. The two men fielded rival armies in a seven-year war that transformed the former white-ruled British colony of Rhodesia to black-ruled Zimbabwe.
Dabengwa, Nkomo’s top aide and wartime intelligence chief, was hailed by supporters as a hero in the struggle that brought independence 1980.
Detentions of Nkomo’s supporters were a major obstacle to unifying the parties, a move Mugabe considers necessary to achieve his avowed aim of creating a one-party state in this Western-style democracy.
″We never deserved to have been in detention at all and have never participated in banditry or destabilizing activities,″ Dabengwa said. ″We are coming out as free citizens ... with no conditions at all.″
He gave no reason for freeing Hartlebury and Evans, who were in jail five years, insisting ″we remain convinced that they were working for South Africa.″
″We want to create conditions of peace and relax some of our rigid laws, so we have taken the gamble of releasing them,″ Nkala said.
A British spokesman here said their release ″solves a longstanding consular problem between us and Zimbabwe.″